Muhaajiriin laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Muhaajiriin laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya
Migrants are seen in a dinghy as they are rescued by Libyan coast guards in the Mediterranean Sea off the coast of Libya, October 18, 2019. Picture taken October 18, 2019. REUTERS/Libyan Coast Guard/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Ku dhawaad 100 qof oo muhaajiriin ahaa ayaa laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Liibiya halka 15 qof ay ku dhinteen badda.
Inta badan dadkan lasoo badbaadiyay Axaddii waxay ahaayeen muhaajiriin kasoo jeeda dalalka Cameroon, Suudaan iyo Mali, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee AFP.
Jimcihii Ha’yadda arrimaha socdaalka qaabilsan ee IOM ayaa ku warrantay in ugu yaraan 150 qof oo muhaajiriin ahaa oo isugu jiray rag, haween iyo carruur la qabtay isla markaana dib loogu celiyay Liibiya.
Waxay sidoo kale IOM in 3,700 qof oo muhaajiriin ahaa sanadkan dib loogu celiyay Liibiya kuwaas oo aysan xaaladdooda wanaagsaneyn kadib markii la xiray.
Previous articleDHAGEYSO:- Warka Duhur ee Radio Risaala 01-03-2021
Next articleMuuse Biixi oo amray in Xukuumadda bixiso qeyb kamid ah lacagta musharixiinta Golaha Wakiilada